Waxyaalaha BuzzFeed-ka ee BuzzFeed Qiyaasahaaga mustaqbalka
Web & Raadi Sameynta Website
Qaado 9 Meelood oo Muhiim ah si aad u aragto mustaqbalkaaga
U ogolow BuzzFeed Genie inuu muujiyo Dhamaan
Haddii su'aalahan BuzzFeed ay yihiin hage kasta, waa inaan u guuraa Michigan waxaanan sii wadaa inaan noqdo astronaut. Ugu yaraan taasi waa waxa bogga ii sheegey ka dib markii aan qaatay qaar ka mid ah su'aalaha shakhsiyadeed ee caanka ah. Waa inaan sameynaa wax sax ah, inkastoo, sababtoo ah waxay i siiyeen inaanan u baahneyn in aan jimicsi dheeraad ah sameeyo (inkastoo aan dhib badanahay) oo waxaan ku noolahay nolol caafimaad dheer.
Waxaa laga yaabaa in dhammaantood ay hoggaansamaan, laakiin ma jecel yahiin miyir-darrida is-baadi-goobka shakhsi ahaaneed ee BuzzFeed-ka shakhsi ahaaneed? Waxaan dhawaan soo qaaday ton ah oo aan uxadeynay natiijooyinka si aan u aragno sida ay u jecel yihiin.
Halkan waxaad ka helaysaa sagaal madadaalo aan helay waxaan ku jiray habka loogu talagalay in lagu muujiyo qaybo muhiim ah ee shakhsiyaddaada iyo noloshaada. Waxay ka mid yihiin kuwa ugu caansan - oo xiiso leh - Su'aalaha BuzzFeed.
Xaaladee Xaqiiqdii Ku Xaqiijisay?
U sheeg BuzzFeed silsiladda raashinka ee ugu xiisaha badan, barnaamijka TVga, muusikada, jilayaasha iyo xayawaanka. Ku dhaji tilmaamaha si aad u sharaxdo tayada wanaagsan ee lammaanahaaga iyo kuwa xunba. Ka dibna dooran sawir muuqaal ah iyo calaamada aad jeceshahay iyo voilà, BuzzFeed wuxuu kuu sheegi doonaa dawladda Mareykanka khibradaada ugu wanaagsan. Waxay ii sheegtay inaan ka tirsanahay Michigan, inkastoo aan ku noolahay Maryland. "Waxaad tahay qof caqli leh, saaxiibtinimo, oo raaxo leh," ayaa soo koobay. Waxaan filayaa in qoraaga buuggani uu jecelyahay dadka Michigan, laakiin anigu ma xiro boorsooyinkayga weli.
Maxay tahay Xirfadlaha Aad Ku Jirto?
Ka jawaab 10 su'aalood oo dhakhso ah oo inta badan qiyaasaan sida aad jeceshahay inaad ku qaadato wakhti iyo lacag. Yaa "Riyadaada Riyada"? Sideed u bixin lahayd canshuur celin? Dooro joornaal, shabakad bulsho iyo nooca filimada. Ka dib markii aan gujiyay dhamaan xulashadayda, waxay ii sheegtay inaan noqonayo astronaut sababtoo ah waxaan ahay cajiib iyo "raadiye". Shaqooyinka kale ee la bixiyey waxay ahaayeen cilmi-baarayaal (oo ah tan hadda aan sameeyo!) Macalin.
Kumbuyuutarka Akhriska ee Akhriska (Palm Reading Quiz) ayaa muujinaya mustaqbalkaaga
Tani waa mid ka mid ah rikoodhadayda, sababtoo ah sawirrada faahfaahsan ee gacmuhu waxay ku tusinayaan khadadka ay ku qoran tahay timirta-akhriska. Marnaba ma hubin taas oo ahayd "khadka nolosha" ama sida aan ugu sheego xarigkayga "qadar" ka "line of my". Hadda waxaan ogahay. Warka wanaagsan ayaa ah, BuzzFeed ee qoraaga calaacaleyda ah ayaa iga dhigey qaybta "xooggan" waxaana la saadaalinayaa, "Waxaad heli doontaa nolol aad u dheer, oo buuxa nolol mug leh." Oh, waxaan dareemayaa in ay aad u yaraatay - mana aanan xitaa bixinin aqriye akhriska!
Sidee baad u noqotaa?
Haddii dad aad u baqdin badani ku dhibtoonayaan, tani waxay noqon kartaa fu n. Haddii aadan ka fiirsanin in dadku ay yihiin kuwo xag-jir ah oo aanad sidan oo kale adigu, waxay noqon kartaa mid caajis ah. Jawaabaha waa muuqaal. Ilaa hadda, dhammaanteen waan ognahay micnaha habdhaqan ee xag-jirka ah iyo in aysan habooneyn habdhaqanka, sax? Weli, dhowr ka mid ah jawaabaha ayaa waxoogaa xiiso leh. Dabeecad xun oo dabiiciga ah ayaa ka sii dari karta. Buzzfeed wuxuu ii sheegay inaanan ahayn mid xad dhaaf ah, laakiin waliba doorashooyinka waa kuwo cad haddii aad rabto jawaabtaas.
Sidee & # 34; Bro & # 34; Ma tahay?
Waxaad u baahan tahay wakhti yar oo aad rabto inaad ku raaxaysatid adigoo u adeegsanaya middan, laakiin waa mid aad loo jecelyahay - waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay dabeecadaha xunxun. Akhri in ka badan 100 (oo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah waxqabadka dhabta ah ee dhibta) hab-nololeedka oo aad soo qaado wixii ku haboon inaad ogaatid haddii "Bro" ay ku haboon tahay. Ka iibso Hollister, Xasillooni iyo Express? Miyuu qoob-ka-shaqeeyaa xabbad-joojin ah oo ka qayb galaya xafladaha Kid Cudi? Kaadi dadweynaha? Dadka ku soo jiid inta ay seexanayaan? Waxaad helaysaa fikradda. Waxaan bartay inaan ahay "dhab ahaantii ma ahan" bro "- badanaa sababta oo ah wax kasta oo aan sameeyey ayaa la akhriyay oo diidaya jawaabaha suurtogalka ah adigoon riixin. "Waxaad fiirisay liiskaan 0 ee 130 liiskaan!" si sax ah ayay ii sheegtay.
Waa maxay waxyaabaha aad rabto Emoji?
Tani waa mid fudud oo degdeg ah. Waxay ku saabsan emojis, kuwaas oo kuwa yaryar ee loo isticmaalo in lagu gudbiyo dareennada fariimaha qoraalka ah. Dooro hal emoji oo ka soo jeeda 21 sawir oo yar oo sawirro ah, wuxuuna kuu sheegayaa dareenka ay u taagan tahay iyo waxa uu kuu fasirayo waxa kuu sheegaayo. Nooca la doortey ee aan u jeeday waxa aan isku dayey inaan noqdo mid sifiican ama qaboow. "Moon Emoji: Adiga ayaa ah qofkiina ... qofkuna waa mid cajiib ah, waxaa laga yaabaa inuu aad u xoog badan yahay Emojis"
Heerkee Habboon ee Adigu?
Midkani kuma siinayo doorashooyin badan oo aan doorin, sidaa daraadeed waxaad asal ahaan ka hadlaysaa heerarka kala-soocidda. Waxay igu calaamadisay "khafiifin fudud" waxayna tiri: "Waxaad leedahay waxoogaa niyadjabsan, laakiin waxaad leedahay waxyaalo kale oo la xayiray."
Waa maxay Fasalka aad ku Heshay Nolosha?
Dhammaan BuzzFeed jecelayaasha xiisaha leh ayaa laga yaabaa in ay middan qaateen. Waxaa si faahfaahsan u xoojiya sawirka weyn ee nolosha. Ma waxaad cunaysaa caqli, jimicsi iyo wax qabad wanaagsan oo wanaagsan? Midkani waxa uu i nadiifiyay A + ee darajada nolosha, iyo hey, waxaan xitaa u sheegay inaanan jimicsi lahayn. Waxyaabaha waa in ay khaldan yihiin macquulnimada miisaanka - ama adduunka intiisa kale way ka sii daba dheeraan kartaa caafimaadka inta aan ka fikirayay.
Hogwartsee Hoggaariyeha Ma Ku Baxday?
Masuuliyiin ka tirsan Dugsiga Hogwarts ee Witchcraft Wizardry, meesha Harry Potter uu bartey ganacsigiisa, wuxuu u qeybiyay kursigan sare ee barashada afarta jaaliyadood ama "guryaha". Guri kastaa wuxuu magaciisa ka qaadanayaa aasaasihiisa. Tijaabadani waxay muujineysaa haddii aad degan tahay Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, ama Slytherin.
5 Tilmaamo lagu dooranayo Mawduuca Mawduuca
Haddii aad doorato Rackspace ama Amazon EC2?
Sidee Ayuu Saameyn Ugu Saameyn Karaa Xawaaraha Sare?
Blog Archives: Waxa ay yihiin iyo sababta ay u yihiin
Sida loo isticmaalo Tumblr ee Blogging iyo Networking
Kaabayaasha Nalalka Gudbinta ee Xogta Waalidka ee VMs
Sida loo abuuro Your Blog Qodobka Xayeysiinta
Qaybaha ugu muhiimsan ee Blog
5 Siyaabaha laguugu soo koobi karo Macluumaadkaaga
Kusoo guuri ama Ku Dheji Boostada Laga Soodhigi karo Hal Gmail
7 Kanban Guddi Hagaajinta Mashruuca
Tilmaame-barka Bilowga Hore ee Habka Foomamka
Tilmaamaha Muusikada Guriga iyo Muuqaalka Muuqaalka ah ee Multi-Zone
10 ka mid ah Ciyaaraha Kubadda Ciyaaraha ee Best Android
Xiritaannada Looma baahna
Talooyin ku saabsan Horumarinta Barnaamijyada Caruurta
Ciyaarta ugu wanaagsan ee Wii-Kaliya oo Adiga Ciyaareysa
Sida Loo Helo Qofka Online - Toban Gacmeed Fiican
Khiyaamadda Oblivion - Xeerasha Garsoorka
Sidee looga fogaadaa isku xirnaanta automatic si ay u furto Networks Wi-Fi
Dardaarinta Qaadashada Daroogada: 4 Waxyaabaha Laga Fikiro
Vizio SB4551-D5 5.1 Nidaamka Nidaamka Baraha iyo More ...
101 Isticmaal Isticmaala Macaamiisha Caanka ah
Sidee loo qaabeynayaa miisaaniyadii Excel 2010 ee Miisaanka
Sidee loo xajiyaa Microsoft Office Files
Ku dar Farri Gelinta Macluumaadkaaga Isticmaalka Terminal ama Nidaamka Nidaamka